विवाह अगाडी आफ्नो पार्टनरलाई सोध्नै पर्ने यी ५ प्रश्न !! आजै सोध्नुहोस र शंका हटाउनुहोस् - Purbeli News
विवाह अगाडी आफ्नो पार्टनरलाई सोध्नै पर्ने यी ५ प्रश्न !! आजै सोध्नुहोस र शंका हटाउनुहोस्
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १९, २०७६ समय: २१:१६:५९
यस्तोमा बिवाह अगाडि नै फाइनान्सियल विषयमा खुलेर कुराकानी गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रेम विवाह होस् वा मागी विवाह यी दुबैमा यो गर्नु आवश्यक छ । यदि तपाई हुनेवाला जीवनसाथीलाई राम्ररी जान्नु हुन्न वा लामो समयदेखि जान्नु हुन्न भने पैसासँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न असहज हुनसक्छ ।
तर कुरा तपाईको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । पैसाको विषयमा सानो मुनमुटावले तपाईको सम्बन्धमा ठूलो पर्खाड खडा गर्न सक्छ । यसकारण पैसासँग सम्बन्धित यी पाँच प्रश्न विवाह अगाडि नै आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसाथीसँग सोध्नुहोस् :